Shiinaha YASKAWA robot maaraynta MOTOMAN-GP225 warshad iyo soo saareyaasha | Jiesheng
YASKAWA robot maaraynta MOTOMAN-GP225
Ku YASKAWA robot maaraynta culeyska ballaaran MOTOMAN-GP225 wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 225Kg iyo ugu badnaan dhaqdhaqaaqa 2702mm. Isticmaalka IIts waxaa ka mid ah gaadiidka, qaadista / baakadaha, suuxdinta, isku imaatinka / qaybinta, iwm.
Qabashada Robot Sharax
Ku robot maaraynta culeyska ballaaran MOTOMAN-GP225 wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 225Kg iyo ugu badnaan dhaqdhaqaaqa 2702mm. Isticmaalkiisa waxaa ka mid ah gaadiidka, qaadista / baakadaha, suuxinta, isku imaatinka / qaybinta, iwm.
MOTOMAN-GP225 wuxuu ku guuleystaa awooda maaraynta ee heer sare ah iyada oo loo marayo tayada xambaarsan ee wanaagsan, xawaaraha, iyo xaddiga la oggol yahay ee dhidibka curcurka isla heerkaas. Ku guuleysto xawaare aad u sarreeya fasalka 225Kg oo gacan ka geysta hagaajinta wax soo saarka macaamiisha. Iyada oo la hagaajinayo xakamaynta iyo hoos u dhigista, waqtiga xawaaraha iyo hoos u dhaca ayaa lagu soo gaabiyey xadka iyada oo aan lagu tiirsanayn qaabka. Culeyska xambaarayaa waa 225Kg, wuxuuna qaadi karaa walxo culus iyo clamps laba jibbaar ah.
Robotka wax lagu qabto ee baaxadda weyn MOTOMAN-GP225 waa ku habboon yahay ah YRC1000 xakamaynta golaha wasiirada oo wuxuu adeegsadaa fiilo koronto si loo yareeyo waqtiga hogaaminta. Markaad beddeleyso fiilada gudaha, xogta barta asalka ah waa la ilaalin karaa iyada oo aan la xirin batteriga. Yaree tirada fiilooyinka iyo iskuxirayaasha si loo hagaajiyo waxqabadka shaqada. Heerka ilaalinta curcurka waa heerka IP67, waxayna leedahay qaabdhismeedka curcurka u adkaysta deegaanka.
Faahfaahinta Farsamada ee Handling Robot :
1340Kg 5.0kVA 100 ° / seken 90 ° / seken
97 ° / seken 120 ° / seken 120 ° / seken 190 ° / seken
Qalabaynta aalado ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa maaraynta otomaatigga ah ee qalabka mashiinka, khadadka wax soo saarka otomaatiga ah ee mashiinada feedhka, khadadka isku xidhka otomaatigga ah, xaraashka iyo maaraynta, iyo weelasha. Waxaa qiimeeya wadamo badan waxayna galisay dad aad u fara badan iyo ilo maadi ah cilmi baaris iyo codsi, gaar ahaan heerkulka sare, cadaadiska sare, boodhka, buuqa, iyo munaasabadaha shucaaca iyo wasakhda, waana mid si aad ah loo adeegsado.
Hore: YASKAWA DHAQAALAHA DHALASHADA MOTOMAN-GP200R
Xiga: YASKAWA XAQIIJINTA ROBOT MOTOMAN-EPX1250
6 Axis Qabashada Robot
Robotka Gacanta otomaatiga ah
Qabashada Gacanta Robot
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta
6 Axis Qabashada Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Qabashada Gacanta Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta,